Crowdfire: Tsvaga, Curate, Govana, uye Shambadzira Yako Zvemukati ZveSocial Media | Martech Zone
Rimwe rematambudziko makuru ekuchengetedza nekukudziridza kambani yako yemagariro midhiya ndeye kupa zvirimo zvinopa kukosha kune vateveri vako. Imwe yemagariro midhijimendi manejimendi manejimendi inomira kunze kubva kumakwikwi ayo yeiyi iri Boka moto.
Kwete chete iwe unogona kubata akawanda enhau enhau maakaunzi, kuongorora mukurumbira wako, kuronga uye kugadzirisa ako ega kushambadzira… Crowdfire zvakare ine curation injini uko iwe kwaunogona kuwana zvemukati izvo zvinozivikanwa pasocial media uye inokodzera vateereri vako.
Crowdfire Yemukati Discovery uye Curation
Boka moto inoita kuti iwe ugone kuwana zvinyorwa uye mifananidzo vateereri vako vachada, kuti iwe ugone kuigovana navo neese ako eakaunzi maaccount kuti uchengete yako timeline kubhidha!
Hechino pfupiso yechinyorwa chavo chinokurudzira injini:
Boka reMoto Rakazvimiririra Rinoburitsa Zvemukati
Ramba uine ziso kunze kwekuvandudzwa kubva pawebhusaiti yako, blog, kana zvitoro zvepamhepo, uye gadzira zvinokurumidza, zvakanaka maposita ezvese zvinyorwa kuti ugovane zviri nyore pane ako ese maficha profiles. Boka moto inogonesa vaparidzi kubatanidza yavo yemukati RSS feeds yekushambadzira otomatiki kumaakaundi maakaundi.
Crowdfire Yakarongedzwa Zvemukati Kuburitsa
Boka moto ine basa rakakura kuronga zvese zvako zvemapositi pamberi uye nekuzvishambadza otomatiki panguva dzakanakisa kana panguva dzakasarudzwa newe, zvichikuchengetera matani enguva uye kushanda nesimba.
Boka moto automagically inogadzirisa zvaunotumira kuti uzvigadzirise kune yega yega media media chiteshi, uchibvisa musoro wekugadzira akaparadzaniswa ezvinyorwa zvemumwe neumwe.
Crowdfire Automated Yemagariro Midhiya Kuzivisa
Crowdfire ine mushumo anovaka iyo inogonesa vashambadzi kuvaka, kuronga, uye kugovana tsika tsika mishumo ne data mapoinzi iwe aunoda kuratidza.
Wedzera ese masocial network eunosarudza mune imwe mushumo
Iyo yekunze-kwe-iyo bhokisi template kune ako ese ekuzivisa zvido
Sarudza uye sarudza iyo data poindi yakakosha kwauri
Dhawunirodha mharidzo-yakagadzirira PPT uye PDF mishumo
Ronga vhiki nevhiki / pamwedzi mushumo kunze kwenyika zvakananga kune yako email
Joinha 19 mamirioni evashandisi kusimudzira bhizinesi rako kuburikidza nesocial media zvemukati curation uye kutsikisa!
Tanga KwaMahara NeRuzhinji Moto
Kuzivisa: Ini ndakabatana Boka moto.
Tags: content curationkuwanikwa kwezvinhuvanhu vazhinjimukurumbira manejimendirss kune vezvenhauevanhu vezvenhaumagariro enhaumagariro enhau analyticszvemagariro midhiya zvemukatimagariro enhau manejimendisocial media inotauramagariro enhaupasocial media kutsikisamagariro enhausocial media schedulesocial media kuronga